အားလုံးကို ကြိုတင် အသိပေးတာပါ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အားလုံးကို ကြိုတင် အသိပေးတာပါ ။
အားလုံးကို ကြိုတင် အသိပေးတာပါ ။
Posted by alinsett on May 29, 2012 in Arts & Humanities, Critic, Myanmar Gazette, News, Short Story | 36 comments
( ကျွန်တော် နှင့် တိမ်ယံသစ္စာ )
2012 / မေလ သည်… အေးမြသော မိုးညများနှင့်အတူ…ထူးခြားကောင်းမွန်သော.စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုပါ..
ခေါ်ဆောင်လျက်..ကျွန်တော့်ထံေ၇ာက်လာခဲ့သည် ။
၀တ္ထု ပီပီသသ စာအုပ်များကို မက်မောစွာ.တောင့်တ တတ်သော ကျွန်တော့်အတွက်….
မမေ့နိုင်စရာ..စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည် ။
ထိုစာအုပ်၏ အမည်မှာ..တိမ်ယံသစ္စာ ဖြစ်သည် ။ တိမ်ယံသစ္စာ ကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူမှာ…၀င့်ပြုံးမြင့် ဖြစ်၏ ။
( ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့် ၏ ဆောင်းည ရှိုက်သံကို..ဂေဇက်တွင် ညွှန်းဆို ဝေဖန် ခဲ့ပြိးပါပြီ။ )
ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရွေးချယ် ပြန်ဆိုသော.စာအုပ်များမှာ တစ်မျိုးတစ်မည် ထူးခြားနေတတ်တာ တော့…..
အမှန်ပဲ ဖြစ်သည် ။ ယခုလည်း…တိမ်ယံသစ္စာ….တဲ့ ။
ကျွန်တော်..(.လုံးဝ ) ထင်မထားသော..အချိုးအကွေ့ များဆီ နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်း ဆွဲခေါ်သွားသော..စာအုပ် …။
ခံစားချက် ပြင်းထန် တတ်သော ကျွန်တော့် စိတ်နှလုံးကို ” ရသမြောက်ခြင်း တို့ ၏ ကမ္ဘသစ်တစ်ခုဆီ.”…ခေါ်ဆောင်သွားသော..စာအုပ်..။
ကျွန်တော် အံ့သြတကြီး…ခံစားခဲ့ရသော…..၊ ဘယ်တော့မှလည်း..မမေ့နိုင်တော့မည့် စာအုပ်…….။
( တိမ်ယံသစ္စာကို ခံစားကြည့်ခြင်း..)
မူရင်းစာရေးဆရာ…KHALED HOSSEINI ရေးသားခဲ့သော..
THE KITE RUNNER ကို ” တိမ်ယံသစ္စာ “ဟု မြန်မာပြန် အမည်ပေးကာ ၀င့်ပြုံးမြင့် က မြန်မာဘာသာ ပြန်ပေးထားပါသည် ။
အာဖဂန်နစ္စတန်သား…စာရေးဆရာ…H0SSEINI သည်…THE KITE RUNNER စာအုပ် တစ်အုပ်တည်းဖြင့် ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
THE KITE RUNNER သည်လည်း..ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သော.စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် ။
( KHALED HOSSEINI သည်..ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး.. နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြင့်…အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ …ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်သည် ။ )
THE KITE RUNNER သည်..ရသ၀တ္ထုတစ်အုပ် ဖြစ်ရုံမျှမက…သမိုင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ…မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်း..ဖြစ်ခဲ့သည် ။
သံယောဇဉ်ကြီးသူတို့ ၏ မေတ္တာတရား.၊ သစ္စာတရားများ…။
ထို့ အပြင်..ပေးဆပ်မှုဖြင့်သာ..ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့သူများ၏…စိတ်လှုပ်ရှားစရာ…ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်း….ဖြစ်ပါသည် ။
1970 နောက်ပိုင်း ၊ ဆိုးဝါးသော အခြေအနေများကြားမှ..အာဖဂန်နစ္စတန်( AFGHANISTAN ) ၏ မြင်ကွင်း..၊
ဘ၀တစ်ခုလုံးဖြင့် ရင်းခဲ့သူ ၊
သူတို့အားလုံး၏ ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းများက….
( ကြိုတင် အသိပေးခြင်း…)
တိမ်ယံသစ္စာ ( THE KITE RUNNER ) ကို ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်..ကိုယ်တိုင်က
အလင်းဆက် သို့ …..ပေးပို့ ကာ..ဖတ်ကြည့်စေခဲ့ပါသည် ။
ထူးခြားကောင်းမွန်သော စာပေလက်ရာ တစ်ခုမို့ကျွန်တော် သဘောကျသော စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည် ။
ထို့ ကြောင့် ဂေဇက် တွင် အခန်းဆက်..၀တ္ထု အဖြစ်..တင်ပြချင်လာပါသည် ။
( အားလုံးကို ဖတ်စေချင်လို့ ပါ ။)
တိမ်ယံသစ္စာကို…ဂေဇက်မှာ တင်ပါရစေ…ဟု.. ခွင့်တောင်းသောအခါ…
ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်က ခွင့်ပြုခဲ့ပါသဖြင့်…..
…..တိမ်ယံသစ္စာကို မကြာခင်..အခန်းဆက် တင်ပြပါမည့်အကြောင်း….
ကြိုတင် အသ်ိပေးအပ်ပါသည် ။
( အလင်းဆက် ၏ မှတ်ချက် )
ထူးခြားကောင်းမွန်သော ဇာတ်လမ်းနှင့် ရသမြောက်သော…စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်၍
တိမ်ယံသစ္စာသည်….ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ..တသသ စွဲကျန်ရစ်သော စာအုပ် ဖြစ်ပါသည် ။
( ပန်ကြားချက် )
စာအုပ်ကောင်း ဖတ်ချင်သူ စာချစ်သူများ….
စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု ပေးကြပါဦး..လို့ ..။
( ကျေးဇူးတင် ထိုက်သူများ…. )
တင်ပြခွင့်ပြုခဲ့သော….ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်…..တို့ အား..အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။
ကျွန်တော့် ပို့စ်များ.( ကဗျာများ..၊ စာများ) ကို..အမြဲလိုလို ဖတ်ရှု ခံစား၍
ဝေဖန် အားပေးခဲ့သော…ချစ်သော စာချစ်သူမိတ်ဆွေများ…
အခြား စာဖတ်သူများ..အားလုံးကိုလည်း….လေးစားခင်မင် ကျေးဇူးတင်လျက်…….
29 .5 .2012 . PM
ခုလို ရှင်းလင်းခွင့်တောင်းပြီး ကျုပ်တို့ ဖတ်ရအောင် အခန်းဆက်ရေးပေးမယ်ဆိုတော့
စာအုပ်က ဆန်းတယ်ဗျ။ ဘယ်လို ဆန်းသလဲ.ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက်.ကျေးဇူးပါ။
1 .6 .2012..ညနေလောက် စတင်ဖြစ်မယ်. ထင်တယ်။
ထူးခြားတဲ့ စာအုပ်ဆို…မျှဝေချင်တယ် ။ ပြောပြချင်တယ်ဗျ။
ရေးတင်ပြီဆိုရင်တော့ ဖတ်ပြီဘဲ ။
စာဖတ်ငတ်သူမှာ ဆိုက်ထဲရှောက်မွှေမှာ… ကျုပ်ပါဘဲ ခင်ဗျာ ။
‘ဒါတွေကတော့..ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရဲ့
ဆောင်းညရှိုက်သံ.ကို ကျွန်တော် ခံစားထားတာတွေပါ ။
ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ.ကြောင့်…ကျွန်တော်. သတိရနေတတ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ ရေးတင်ဖို့အားအင်တွေပေးကြတာ…။
ကျုပ်လည်း ဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေတယ်ဗျာ ..
ကိုအလင်းဆက် တင်ပေးမယ့် ဒီစာအုပ်ကို
ဖတ်ရှုဖို့ စောင့်နေကြောင်းရယ်ပါ ….
စောင့်မျှော်သူတွေ များလာပြီ..ဆိုတော့…တင်ဖို့အားတွေ ပိုရှိလာပြီ.။
wintpyone myint says:
သူကြီးနှင့်တကွ ခင်မင်လေးစားရသော မန်းဂေဇက်အဖွဲ့ဝင်များသို့
ပြုံးရဲ့ ”ဆောင်းညရှိုက်သံ ” ဘာသာပြန်စာအုပ်လေးကို အကြောင်းပြုလို့ မော်ဒန်ဆရာလေး အလင်းဆက်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရွာကို ပြုံး သိပ်စိတ်ဝင်စားခဲ့မိပါတယ် သူကြီးရေ။ ပြုံးရဲ့ ဆောင်းည ကို ရတနာပုံနေပြည်တော် သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်ပေးလို့ သူကြီးဦးခိုင်ကို ကျေးဇူးသိပ်တင်ကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူကြီးရေ၊ ပြုံးက ရင်တုန်နေတာရှင့်။ တော်ကြာ မူရင်းစာရေးဆရာမက သိသွားပြီး တရားစွဲမလား လို့။ ပြုံးတို့က ရှိတဲ့ပညာလေးနဲ့ လုပ်စားကြရတာလေ။ နိုင်ငံတကာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေကို နား လည်တာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို ချောချောမောမော ပြီးသွားတော့ ပြုံးလည်း စိတ်အေးရပါတယ်။
ပို့စ်တိုင်းလိုလိုမှာ ဆရာလေး အလင်းဆက်က မေးလ်လိပ်စာလေး ထည့်ပေးတတ်တော့ ပြုံးအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ ပြုံးတစ်ခု စဉ်းစားမိတာက ညွှန်းတဲ့လူက ညွှန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ စာအုပ်က စောင်ရေနည်းနည်းလေးထုတ်တယ်။ အုပ်ရေ ၃၀၀၀ လောက်ပေါ့ရှင်။ တိုင်းပြည့်လူဦးရေက သန်း ၆၀ နီးပါးဆိုတော့ ဆင်ကြီးပါးစပ် နှမ်းစေ့ကလေး လေးစိတ် စိတ်ပြီး ပက်သလိုပဲလား။ ရှာဖတ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်။ ဒီတော့ ညွှန်းနေမယ့်အစား စာအုပ်ကို ဒီအတိုင်းတင်လိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား။
စာအုပ်ကို ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုလည်း ထည့်စဉ်းစားစရာတွေ ရှိနေပြန်ရော။ အွန်လိုင်းမီဒီယာက တစ်မျိုး ပဲ သူကြီးရယ်။ စာသိပ်ရှည်ရင်လည်း ဖတ်မကောင်းဘူး။ အခန်းဆက်ထည့်တဲ့အခါ တစ်ပုဒ်နဲ့တစ်ပုဒ် ရက်သိပ် ကြာလို့ အလှမ်းကွာသွားရင်လည်း ဖတ်ရတဲ့လူမှာ အရှေ့က ဘာရေးထားလဲ မမှတ်မိတော့ပြန်ဘူး။ ၀တ္ထုတစ်အုပ်လုံးက ရှည်လွန်းရင်လည်း အိုင်နေပြန်ရော။ ဒါကြောင့် ပြုံးလည်း ပြန်ပြီးသား ၀တ္ထုတွေထဲက သိပ်မရှည်တဲ့၊ သမိုင်းတန်ဖိုးအရလည်း ကြီးတဲ့၊ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရွေးပြီး ဆရာလေး အလင်းဆက် ထံ ပို့ပြီး မန်းဂေဇက်မှာ တင်ရင်ကောင်းမကောင်း မေးကြည့်ခဲ့တယ်လေ။ သူက တင်စေချင်တယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ဆီကိုပဲ စာအုပ်ထုတ်ဝေတုန်းက နဂိုရိုက်ထားပြီးသား စာတွေကို ဇော်ဂျီဖောင့်ပြောင်းပြီး ပို့ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ဖာသာ သင့်တော်သလို မတိုမရှည် ဆစ်ပိုင်းပြီး တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဆရာလေး အလင်းဆက်ဟာ ထပ်ဆင့်ခံစားမှုမှာ အားကောင်းတယ်လို့ ပြုံး ယူဆထားပါတယ်။ သူက စာအုပ်ကို ညွှန်းရုံတင်မကဘူး။ ဇာတ်ကြောင်းအပေါ် ထပ်မံခံစားတတ်တဲ့ အနုပညာအာရုံ ထူးခြားတာကို အားလုံးသိကြမှာပါရှင်။
ပြုံးက ခလေးတစ်ဖက်နဲ့ ဘာသာပြန်တာကိုလည်း လုပ်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် မန်းဂေဇက်မှာ မင်ဘာဝင်ပြီး ပို့စ်မတင်နိုင်တာ၊ ကွန်မင့်သိပ်မပေးနိုင်တာ နားလည်ပေးပါ သူကြီးရေ၊ အဲဒါတွေသာလုပ်ရင် ပြုံး ထိုင်ရာက မထနိုင်ဘဲ ချိသွားလိမ့်မယ်။ အခုလို ကြိုးကြား ကြိုးကြား ၀င်ဖတ်တာတောင် မန်းဂေဇက်ရွာကြီးကို စွဲငြိနေ တဲ့အပြင် ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်း တစ်ဖက်သတ် သံယောဇဉ် ဖြစ်နေမိပြီလေ။
ပြုံးက တီတီနု ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အထူးသဖြင့် ပရဟိတအလုပ်တွေကို ကမကထလုပ်နိုင်တဲ့ ရွာသူများနဲ့ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ရွာသူများကို အားကျနေတဲ့သူပါရှင်။ ရွာရဲ့ကာသသားခေါင်း ကိုကြီးကြောင် ကိုလည်း ပြုံးက မမေ့မလျော့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်။ ပြုံးက ဦးဖောကြီး၊ ဦးဘလက်၊ လေးပေါက် ၊ အဘနီ တို့ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ပါပဲ။ နည်းပညာဆိုင်ရာနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာ၊ မာကက်တင်းတို့ကိုတော့ ပြုံးရဲ့ဦးနှောက်လေးက ဖတ်ဖို့ အလှမ်းမမီရှာဘူး။
ပြုံးက နှမျောတတ်သူမို့ ပြုံးရဲ့ တိမ်မြုပ်စပြုနေတဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာလေးတွေကိုလည်း နှမျောမိတယ်လေ။ အခုလည်း ပြုံးရဲ့ ရင်သွေးရင်နှစ်လို တန်ဖိုးထား ရတဲ့ ” တိမ်ယံသစ္စာ ” ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာလေးကို ဆရာအလင်းဆက်အားကိုးနဲ့ စမ်းပြီး တင်ကြည့်ချင်တယ်။ ခွင့်ပြုပေးပါလို့ သူကြီးထံမှာ တောင်းဆိုပါရစေ။ ရွာသားအပေါင်း ဖတ်ရှုပြီး ခံစားဝေဖန်ကြပါ။ မူရင်းစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီးသား ရွာသားများလည်း ပြုံး ဘာသာပြန်ပုံကို အားမနာတမ်း ဝေဖန်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
စာအုပ်တစ်အုပ် ကမ္ဘာကျော်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲနော်။ အာဖဂန်သား ဆရာဟိုစိန်နီရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဒီဝတ္ထုထဲမှာ ဆရာ့ရဲ့ အရိုးသားဆုံး အနုပညာ၊ မိသားတစ်စုကို ဗဟိုပြုပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ခြုံငုံသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့၊ ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကို အပိုအလိုမရှိ သင်္ချာ တစ်ပုဒ်လို ကွက်တိဖြစ်အောင် ရေးထားတဲ့ အတတ်ပညာကို ၀တ္ထုရဲ့ ဂုဏ်ရည်အဖြစ် တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အင်မတန်သာယာဝပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့် ငရဲတွင်းထဲ အရှင်လတ်လတ် သက်ဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့ အရှိတရားကို ၀တ္ထုရဲ့ အနှစ်သာရအဖြစ် ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဟိုစိန်နီရဲ့ ကလောင်ဟာ မှော်ဝင်ထားသလား အောက်မေ့ရတဲ့အထိ ရေးလိုက်သမျှ စာလုံးတိုင်းဟာ ပြစ်ရက်စရာ တစ်လုံးမှ မရှိအောင် ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်နေတော့တာ။
ရသစစ်စစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း ” မန်းဂေဇက် ” ဆိုတဲ့ တိမ်ယံထက်က ကွန်ယက်ရွာကို ပြုံးရဲ့ ” တိမ်ယံသစ္စာ ” ဆိုတဲ့ နှလုံးသားသက်လျာ အညတရလက်ရာလေးနဲ့ ဆုံဆည်း ပေးပါရစေလားရှင်။
ဟာဂျာ …ဒီလူဂျီး ဦးသွားဗြန်ဘီ…
ဆြာမ ကို တားတား က အူးအူးဖျားဖျား အားပေးမို့ဟာ ..
ဟို ..စိုမှာစိုးလို့မိုးမိတယ် …ဘာညာနဲ့…
ဂျစ်ပစီ မိုးတိမ် ရောက်လာဦးမယ် ….
မင်ဂါဘာ ဆြာမ …
သြော် … ကြေးမုံဂျီးကိုကြောက်ရလို့ပဲ မုန်းပြချင်ရော့သလား။
ပြုံးတို့ကတော့ ဟို ကဗျာလေးတစ်စလို အို … ဘာတဲ့။
ကြောင်ကြီးအမြီးပမာ (အဲ ဘွာတေး)
သံမဏိကြိုးသွားပမာ … တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့် လက်ရာကို ကိုအလင်းဆက်ကထပ်မံ အခန်းဆက်
တင်ပေးမယ် ကြားရတာ ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ။ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေကို သိပ်အား
ကျတာပါ။တော်တော် နက်ရှိုင်းလှပြီး အယူအဆမလွဲဖို့ ဂရုပြုရတာ စာလုံးရွေးချယ်
ရတာ အဆုံး အားလုံး ပညာသားပါလှပါတယ်။
စာရေးဆရာမ ကိုယ်တိုင်ကတောင် ကွန်းမန့်ဝင်ရေးတယ်ဆိုကတည်းက
တင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါ။ ဆက်ဆက် အားပေးပါမည်။
စာအုပ်ကိုလည်း ကိုအလင်းဆက်ကိုရော ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်ကိုပါ လေးစားသောအားဖြင့်
ဆရာမ ရဲ့ ကွန်းမန့်ထဲက
ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးကလည်း အလွန်လှပပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…………….။
အဲဒီ စာအုပ်က ရုပ်ရှင်ရိုက်သေးလားလို့
ကိုချောကြီးလိုပဲ အပြင်မှာလဲ ၀ယ်အားပေးပါဦးမယ်
ကိုအလင်းဆက် ရဲ့ စာအုပ်အညွှန်းနဲ့တင် စောင့်ဖတ်ရမည်မှာ
ဆရာမစာတွေကိုလည်း.. စောင့်မျှော်ပြီး ဖတ်ပါ့မယ်..။
တင်ပေးမယ့်.. အလင်းဆက်ကိုလည်း.. အထူး အသိအမှတ်ပြုပါတယ်လို့…
သူကြီးကို ကြိုးနဲ့ ချည်ပြီး ၀ိုင်းဆွဲထားကြပါဦး ..
သူကြီး လဲ တိမ်ယံထက် ဆီ မြောက်သွားမှာ စိုးလို့ …
ဆရာမရေ .. ဟိုဘက် ပို့စ်တစ်ခု မှာ ရွာသူသစ်ဆိုတော့ နောက်မိတော့မလို့ ။ နောက်မှ “ဆရာသော်တာဆွေကို ကိုးကွယ်တယ်” မန့်ထားတာတွေ့တော့ စာရေးဆရာမ များဖြစ်မလားလို့ထင်လိုက်မိလို့ ဘရိတ်အုပ် လိုက်မိတာတော်သေးတယ်.. :grin: :grin:
ဖတ်စေချင်လို့ တကူးတက တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
စာအုပ်မိတ်ဆက်တွေ ဖတ်ပြီး မ၀ယ်ဖြစ်၊ မဖတ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေကို ကျော်လွှားပေးလိုက်လို့
သူကြီး ခွင့်ပြုလို့ ကျေးဇူးပါရှင်။ အလကား မဖြစ်စေရပါဘူး။ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဟာ သိပ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပြုံးကိုလည်း ခင်ကြမင်ကြပါ။ ပြုံးက ဦးနှောက်စားတိုင်း မန်းဂေဇက်ကို ၀င်ဖတ်လိုက်ရင် ပါရာစီတမော သောက်ရသလို ဦးနှောက် ကြည်သွားတတ်တာပါ။ တကယ့်ကို တစ်ဖက်သတ် သံယောဇဉ်တွေနဲ့ပါ။
ဦးဘလက်ရေ စာအုပ်က ၀ယ်လို့မရတော့ဘူး။ ကုန်ပြီလေ။
နိုဇိုမီ ရေ ၊ စာအုပ်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ထားပါတယ်။ ဆုတွေ ရထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်က စာအုပ်ကို လုံးဝ မမီပါဘူး။
စာအုပ်ကို ကိုအလင်းဆက် ဆစ်ပိုင်းပြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်း စိတ်ချလက်ချ ဖတ်ပါရှင်။ သူက မန်းဂေဇက် စာဖတ်ပရိသတ်ကို ခံစားမှုနယ်ပယ်ထဲ တရကြမ်း ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
ဆရာမရေ အမြန်သာ တင်ပေးဖို့ ပြောပေးပါဗျ။စောင်နေပါတယ်ဗျာ။
ဆရာ ဘလှိုင်ရေ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဆရာ့စာတွေ အားပေးနေတဲ့သူပါ။ အဲ တစ်ခါ တစ်ခါ အဆက်ပြတ်သွားတော့ အပြည့်အ၀တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။
သတ္တိကောင်းသူလို့ နာဂရချစ်သူ ကို မှတ်မှတ်ရရရှိနေပါတယ်။ ကိုအလင်းဆက် တင်ပေးမှာပါရှင်။ ပြုံးကတော့ နယ်မှာဆိုတော့ မီးက လာချင်မှလာတယ်။ ဒီတော့ ဆိုက်ထဲ မှန်မှန် မ၀င်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။
ဂျူးမတို့လို စာရေး စာဖတ်ပျင်းတဲ့သူတောင် စိတ်ဝင်စားသွားပီ …
အစအဆုံး ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါမယ် …
အညွှန်းနဲ့ တင်ဖတ်ချင်ပြီဗျို့ မြန်မြန်တင်ပါ။ ကိုရီးယားကားလို ပေါ့နော်။ တစ်ခုတော့ တောင်းပန်တယ်နော်။ အခန်းဆက်ကို မြန်မြန်လေး လုပ်ပါ။ ဆက် တငန့်ငန့်တော့ မလုပ်နဲ့ ဗျာ။
သူကြီး၇ဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကြောင့် ၀မ်းသာ ပီတိ..ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။
ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်..ရေ…အကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့..ကွန်မန်းတွေ ၀င်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျ။
ဆရာမ နဲ့ ရွာသူရွာသားတွေလည်း.. ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်..ခင်ခင်မင်မင် တွေ့ ရတော့ ပျော်တယ်ဗျ။
နာဂရ….အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားသော..စိတ်နဲ့ .
1.6.2012..ညနေ မှာ…စပြီး..တင်ဖြစ်ပါ့မယ်။
အခုလို စာအုပ်ကို…စောင့်မျှော်အားပေး..ဖတ်မယ့်သူတွေ..အများကြီးတွေ့ ရတော့….
အရမ်းကို ၀မ်းသာမိတယ် ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။
ဆရာမရဲ့စာအုပ်ကိုမဖတ်ရသေးပေမဲ့ ………ပြောပြထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ တယ်လေ……
အရမ်းကောင်းတဲ့ ငာအုပ်ပါလို့ ….ထပ်ညွှန်းဆိုပါရစေ…….
ဆရာမ….မ၀င့် ပြုံးမြင့် ကိုယ်တိုင်….ကွန်မန့် တွေဝင်ပေးထားတာတွေ့ ရလို့ အလင်းဆက်အစားပီတိ
ဦးခိုင်ရဲ့စေတနာ…….အလင်းဆက်ရဲ့မေတ္တာတို့ နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဆိုတော့ ………
ဒါကြောင့် …..ဆရာမလည်း…ဒီ့ ထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ ……ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်
ဘာသာပြန်တဲ့ ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့် ကိုယ်တိုင် ရွာထဲဝင် လာပြီး နှုတ်ဆက်နေတာ ဂေဇက်ရွာ အနေနဲ့ အလွန် ကို ဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ။
တင်လာပေးမဲ့ ဝတ္ထုအသစ်ကို လဲ မျှော်နေပါ့မယ်။
စေတနာနဲ့ အချိန်ယူ တင်ပေးမဲ့ အလင်းဆက်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-)
လိပ်ပက်ကျိ ကော်နက်ရှင်ကို အန်တုပြီး တင်ဘို့ ကြိုးစားပေတော့
ဘာသာပြန်သူ စာရေးဆရာမကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထင်ပြလာတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ ။
အလင်းဆက်ညွှန်းထားတဲ့ စာအုပ်လေး ဂေဇက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါ … မလွတ်တမ်း ဖတ်ပါဦးမယ် ။
အားပေးဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်…ဖြစ်နှိင်ရင် ၁ ရက် ၁ပုဒ်နူံးလောက်တင်ရင်ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အဆက်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့
ဦးကြီးမိုက်ရေ စာအုပ်ရောင်းကုန်သွားတိုင်း ရောင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ စထုတ်ကတည်းက ပြိုက်ခနဲ ကုန်သွားမယ့် အတိုင်းအတာလောက်ကိုပဲ မှန်းပြီးထုတ်တာပါ။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလောကမှာ ဖြန့်ချီရေးက အခရာကျတယ်ဦးလေးရေ။ အခုဆို စာပေစိစစ်တင်စရာမလိုတော့ပေမယ့် ထုတ်ဝေတိုက်တွေ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် အဆင့်က မတက်သေးပါဘူး။ ဂျာနယ်လောက်ပဲ အလုပ်ဖြစ်တာပါ။ တကယ့်စာကောင်းပေမွန် တွေကို ထုတ်ဖို့ဆိုတာ ထုတ်ဝေသူတွေခမျာ အများကြီး စွန့်စားရပါတယ်။ စာအုပ် တစ်အုပ်ထုတ်ဖို့ အောက်ထစ်အနည်းဆုံး ငွေ သိန်း၃၀ ရင်းရပါတယ်။ ထုတ်ပြီးတော့ ငွေက ချက်ချင်းမရပါဘူး။ ဖြန့်ချီရေးကနေ အလီအလီသွားတောင်းရပါတယ်။ ဆိုင်ပေါ်မှာကြာမယ့်စာအုပ်မျိုးဆို ထုတ်ဝေသူတွေ ဘယ်ခံနိုင်ရည်ရှိတော့မလဲ။ စာအုပ်ထုတ်တာက အပြင်မှာ ငွေတိုးပေးစားသလောက် မကိုက်ပါဘူး။ စာပေစိတ် အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ စာအုပ်တိုက်တွေသာ အနာခံနိုင်ကြတာပါ။ ထုတ်ဝေတိုက်တစ် တိုက်ဟာ ငွေကို သိန်းရာချီပြီးရင်းထားရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စာရေးကောင်းတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးတွေ အများကြီးပါ။ တခြားမကြည့်နဲ့၊ ဂေဇက်ထဲမှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ အဟောင်းတွေထဲက ပြန်လှန်ရှာဖတ်ကြည့်တော့ ဥပမာ မှီ ဆိုရင် တော်တော်စာရေးကောင်းတယ်။ ပြုံးထက်တောင် ကောင်းပါသေးတယ်။ အခုတော့ ဘယ်ရောက်သွား လဲ မသိဘူး။ နောက်ပြီး ရှုံးနိမ့်မှုများနှင့်လူ ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ သူကလည်း ဒုတိယ သော်တာဆွေလား အောက်မေ့ရတယ်။ အခု မတွေ့တော့ဘူး။ မအိတုန်ဆိုရင်လည်း သတင်းရေးတာ ဝေဖန်စာရေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ စာပေအနုပညာလက်ရာတိုင်းဟာ စာနဲ့ပေနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ပြုံးက ခံယူထားသူပါ။ စာရေးကောင်းသူတွေ အများကြီးရှိရက်နဲ့ ဘယ်ထုတ်ဝေတိုက်ကမှ မစွန့်စားရဲကြဘူး။ ငွေကြောင့်ပေါ့ရှင်။
လူတွေကလည်း စီးပွားရေးမကောင်းတော့ တန်ဖိုးကြီးကြီးစာအုပ်တွေ သိပ်ပြီး ၀ယ်မဖတ်နိုင်ကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် အမာခံ ပရိသတ် အရေအတွက်ကိုပဲ မှန်းပြီး မရှုံးအောင် ထုတ်ကြရတာပါ။
သူကြီးက မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး သတင်းစာထုတ်ချင်တဲ့ စိတ်ဇောကလေး ကျန်သေးလားမသိဘူး။ ငွေထုပ်ကြီးကြီးသာ ပိုက်လာခဲ့ပါ။ သတင်းစာတင်မက ဂျာနယ်တစ်စောင်ပါ အပို ထပ်ထုတ်နိုင်အောင် ဂေဇက်က လူအင်အားတောင့်ပါတယ်။
ဘိရုမာ စာပေလောက က လိုတာ သဂျီး မဟုတ် ငွေမဟုတ်
မားကတ္တင်းဗျ မားကတ္တင်း ..နှစ်ပေါင်းများစွာ လူတွေ စာပိုဖတ်ဖို့
ထိထိရောက်ရောက် စနစ်တကျ ပလင်န် ဆွဲပီး ရေရှည် ရေတို
မားကတ္တင်း မဆွဲခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ပေါ့ဗျာ …
စာအုပ်တိုက်တွေ ကို မားကတ္တင်း စာအုပ်တွေ ပြန်ရောင်းမယ်ဆို
အခုပဲ. တင်လိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ.။
မန္တလေးဂေဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ စာရေးသူအလင်းဆက်ရေးတဲ့ ( တိမ်ယံသစ္စာ-၀ံ့ပြုံးမြင်)့စာအုပ်အကြောင်း
စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍဆိုတာ လတ်တလောမြန်မာပြည်မှာထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်များထဲက အလျဉ်းသင့်ရာစာအုပ်များကို ခြုံငုံဖတ်ရှုပြီး စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ စာမြည်းသဘောမျိုးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဒီတာအဖွဲ့က အဲဒီ့ကဏ္ဍကို ရွေးချယ်တည်းဖြတ်ပါတယ်။
ကြော်ငြာကဏ္ဍကတော့ အခကြေးငွေယူပြီး ဒီဇိုင်းနဲ့
ဆိုက်ဒ်အမျိုးအစားအလိုက် ကြော်ငြာပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ငြာကဏ္ဍမှာလဲ စာအုပ်ကြော်ငြာတချို့ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။အဲဒါက ကြော်ငြာတာဝန်ခံနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာကို မဖတ်ရသေးသူများ အဲဒီ့ကဏ္ဍနှစ်ခုမှားမှာစိုးတဲ့အတွက် ခွဲခြားပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ လစဉ်စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍများဖော်ပြတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်မှာ
လတ်တလောထုတ်ဝေနေတဲ့ သုတ၊ရသ၊ပညာပေး၊ဘာသာပြန်စာအုပ်များထဲမှ စာအုပ်ကောင်းများအညွှန်းကို